Profile ny IAS
Toy ny varotra fampisehoana momba ny orinasa automatique ambany CIIF, IAS dia hetsika iraisam-pirenena ho an'ny indostria automatique Solutions, Production sy ny Process automatique, elektrika Systems, Industrial IT & Software sy ny Teknolojia Microsystems. Ny fahombiazan'ny fivoriana teo aloha miantoka ny fampisehoana ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra ara-barotra entanao any an-tsaha automatique tany Asia, ka hataoko ho toy ny tsara kokoa ho an'ny sehatra matihanina sy manam-pahaizana manokana tany an-tsaha mba hiara-.
Ny fampirantiana faritra IAS tonga 56,000㎡ 2017, 618 exhibitors dia avy amin'ny firenena 18 sy faritra, toa an'i Shina, Alemaina, Japana, Korea, Etazonia, Italia, Soisa, Frantsa, Aotrisy, Grande-Bretagne, ny Isiraely, Kanada sy ny sisa. Nandritra ny fampirantiana, sehatra fiadian-kevitra sy ny fihaonambe 65 no natao ary mihoatra ny 178.000 matihanina nitsidika.
Nofuel Power no hanatrika ny IAS, ny fanaraha-maso tontonana, vahaolana automatique fitaovana, maotera faritra fanaraha-maso dia tena malaza ao amin'ny trano heva.
Post fotoana: Sep-12-2018